Furaha sirta ayaa shardi u ah macaamilka intarneedka badankiisa. Generator Password Sare waa barnaamij loogu talagalay in lagu sameeyo furayaasha sirta ah ee sida badan loo isticmaalo si ka ammaan badan. Waad ku mahadsan tahay barnaamijka, waxaad abuuri kartaa furayaal sir ah oo gaar ah oo ay adag tahay in la jebiyo. Thanks to interface...
Barnaamij ay khubaradu ansixiyeen inuu yahay barnaamijka ogaanshaha spyware ee ugu horumarsan, waxaad ka ilaalin kartaa kombiyuutarkaaga Spyware, oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Barnaamijku wuxuu xannibayaa spyware -ka uu aqoonsado ama tirtiro Spyware -ka ku jira nidaamkaaga.Waxaad isla markiiba garan kartaa oo tirtiri...
Battlefield Mobile waa mid ka mid ah sawirada ugu fiican FPS ee lagu ciyaari karo taleefannada Android. Battlefield Mobile, ciyaarta toogashada qofkii ugu horreeyay ee mobilada ee ay soo saartay Farshaxanka elektiroonigga ah, waxaa laga soo dejisan karaa dukaanka Google Play lacag laaan. Diiwaangelinta hore ee Battlefield Mobile, waxaad...
Qaabka Qofka Koowaad ee Witcher 3 waa mid ka mid ah qaababkii loogu talagalay ciyaarta toogashada ee qofka saddexaad The Witcher 3. Waxaa loo furay si bilaash ah NexusMods, The Witcher 3 Qofka Koowaad Mod, sida magacu tilmaamayo, waxay suurtogal ka dhigeysaa in ciyaarta laga dheelo muuqaalka kamaradda qofka koowaad. Waxaad si sahal ah u...
Maareeyaha Kubadda Cagta 2022 waa ciyaar maareynta kubbadda cagta Turkiga oo lagu ciyaari karo kombiyuutarada Windows/Mac iyo aaladaha mobilada ee Android/iOS. FM22 waxay bixisaa habab cusub oo horumarsan si loo helo kooxdaada guuleysata, loo beero qaabkaaga kubbadda cagta, loona guuleysto taageerayaasha. Maareeyaha Kubadda Cagta 2022...
NX Studio waa barnaamij faahfaahsan oo loogu talagalay in lagu arko, lagu socodsiiyo laguna tafatiro sawirrada iyo fiidyowyada lagu qaaday kamaradaha dhijitaalka ah ee Nikon. Isku-darka awoodaha sawir-qaadista iyo fiidiyaha ee ViewNX-i oo leh sawir-qaadista iyo aaladaha dib-u-habeynta ee Qabashada NX-D ee hal shaqo oo dhammaystiran, NX...
Corel VideoStudio waa barnaamij tafatir fiidyow ah oo la socda ikhtiyaarrada gubashada DVD, kala -guur kala duwan, saamayn, taageero la wadaago YouTube, Facebook, Flickr iyo Vimeo, maktabadaha iyo sheybaarada. Soo degso VideoStudio Tifaftiraha fiidiyaha xirfadlaha ah ee Corel, VideoStudio, wuxuu kaa caawinayaa inaad abuurto filimo leh...
BATTLESHIP APOLLO waa ciyaar kombuyuutar cilmiyaysan oo PC ah oo ku dhex gelisa ciyaartoy dagaal ballaaran oo xeeladeysan oo u dhexeeya maraakiibta waaweyn iyo dagaalyahannada taageera. Download BATTLESHIP APOLLO Ciyaartoydu waxay helaan maraakiib dagaal oo aad u ballaaran, waxay doortaan dagaalyahanno taageero iyo kartiyo kale oo gaar...
Chernobylite waa ciyaar cilmiga fiqiga ah ee naxdinta leh ee rpg. Baadh sheeko aan toos ahayn oo ku saabsan baadi-goobkaaga si aad u soo bandhigto runta baroor-diiqdaadii hore ee aad ugu macquulsanayd, 3D ee la baaray ee Aagga Ka-reebitaanka Chernobyl. Soo dejiso Chernobylite Chernobylite waa ciyaar door-badbaadin cilmiyaysan oo ka...
Wicitaanka Waajibaadka: Vanguard waa ciyaar FPS ah (qofkii ugu horreeyay toogtay) oo ay soo saareen Ciyaaraha Sledgehammer ee abaalmarinta leh. Vanguard, oo ah ciyaartii 18aad ee taxanaha Wicitaanka Waajibaadka, ayaa lagu sii dayn doonaa PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S dhufaysyada bisha Nofembar 5. Marqaati ka...
Diiwaanka Mouse waa duubista jiirka oo horumarsan oo kuu oggolaanaya inaad duubto macros oo aad mar dambe maamusho si aad otomaatig ugu noqoto hawlo kala duwan. Soo dejiso Diiwaanka Mouse Diiwaanka Mouse waa barnaamij Windows ah oo cabbirkiisu yar yahay kaas oo duubi kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada jiirkaaga oo si sax ah ugu celin kara...
Barnaamijka Wise Care 365 waa barnaamij fuliya dayactir si uu u maamulo goobaha diiwaanka ee kombiyuutarkaaga, diskka iyo aaladaha kale ee habka ugu hufan. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijka, oo aad u fudud in la isticmaalo, si kor loogu qaado waxqabadka kombiyuutarkaaga si muuqata. Soo degso Daryeelka Wise 365 Wuxuu Ilaaliyaa...
Windows 11 waa nidaamka hawlgalka cusub ee Microsoft soo bandhigtay sida jiilka xiga ee Windows. Waxay la timaadaa qaabab badan oo cusub, sida soo dejinta iyo socodsiinta barnaamijyada Android ee kombiyuutarka Windows, cusboonaysiinta Kooxaha Microsoft, menu-ka Bilowga, iyo muuqaal cusub oo ay ku jiraan naqshad nadiif ah iyo Mac u eg....
Autobahn Police Simulator 2 waa ciyaar jilitaan oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay u dhaqmaan sidii sarkaal booliis oo ay noqdaan ilaaliyaha sharciga ee aan adkayn. Waxaan abuuri karnaa geesiyaheena markii aan bilowno Autobahn Police Simulator 2, ciyaar booliis oo soo dhaweyneysa ciyaartooyda waddada ugu dhaqsaha badan Yurub. Ka dib...
Beeraha Saafi ah 2018 waa ciyaarta jilitaanka cusub ee Techland, oo aan si fiican ula soconno soosaarkeeda aadka u guulaystay sida Dhimashada Iftiin. Beeraha Saafi ah 2018, oo ah jilid -beereed leh tayo leh oo dhaafi kara ciyaaraha Beeraha Simulator, wuxuu isku daraa tayada garaafyada sare leh farsamooyinka ciyaarta ee dhabta ah....
Beast Battle Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay ciyaar dagaal bahal ku salaysan oo fiisikis ah. Waxaan abaabulnaa dagaalo u dhexeeya dinosaurs iyo xayawaanka duurjoogta ah ee Beast Battle Simulator, ciyaar jilitaan u saamaxaya ciyaartoydu inay galaan dagaalo waalan. Dagaalladan oo ay ku jiraan xisaabinta fiisigiska dhabta ah...
Fly Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay jilitaan duulimaad oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato daqiiqado madadaalo ah kaligaa iyo khadka tooska ah ciyaartoy kale. In Fly Simulator, oo ah ciyaar jilitaan aad u xiiso badan, ciyaartoydu waxay marti u yihiin makhaayad cunto degdeg ah. Ciyaarta dhexdeeda, waxaad ku beddeli kartaa...
Simulator Rat waxaa lagu qeexi karaa ciyaar badbaado leh oo leh ciyaar xiiso leh oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay yeeshaan khibrad ciyaar xiiso leh iyagoo beddelaya jiir. Ciyaartaan jilitaanka ah oo aad ku ciyaari karto kombiyuutarradaada, ujeedkayaga jiir ahaan waa inaan ku faafinno microbes -ka aan qaadno meelaha ay dadku ku nool...
Simulator -ka Dhismaha PC waa ciyaar dhisme kombiyuutar oo ku siin kara madadaalo iyo macluumaad labadaba haddii aad rabto inaad hesho fikrad ku saabsan ururinta kombiyuutarada. Simulator -ka Dhismaha PC, ciyaar si madaxbannaan u horumarsan, PC Building Simulator, waxaan ka dhisnaa kombiyuutar meel xoqan. Shaqadan, waxaan ka...
Mechanic Simulator 2018 waa isku xirka ugu dambeeya ee taxanaha ciyaarta jilitaanka ee caanka ah. Ciyaartan dayactirka baabuurka oo aan ku ciyaari karno kombiyuutarradaada ayaa na siinaysa fursad aan ku dhisno oo ku kobcinno boqortooyadeenna adeegga baabuurka. Sawirrada Baabuurka Makaanik Simulator 2018, oo lagu soo saaray xaqiiqada...
Haddii riyadaadu noqoto cirbixiyeen, waa ciyaar jilitaan oo aad ku raaxaysan karto ciyaarista. Jilitaankan bannaan ee loogu talagalay kombiyuutarradaadu wuxuu noo oggolaanayaa inaan ka qaybgalno hawlgallo bannaan oo kala duwan. Ka sokow hawlgallada booska taariikhiga ah sida Apollo 8, hawlgallo bannaan oo Apollo ah oo dhawaanahan ayaa...
World of Warplanes waa bilaash si loogu ciyaaro ciyaarta dagaalka diyaaradaha ee internetka. Wargaming.Net, oo aan sidoo kale ka naqaano World of Tanks, oo ah soosaaraha ciyaarta ciyaarta MMO ee ciyaarta xorta ah lagu ciyaaro. Mawduuca Dagaalkii Labaad ee Adduunka, oo ahaa mawduuca dagaalladii diyaaradaha ee ugu weynaa ee soo mara...
Simulatorka duulimaadka ee Microsoft ayaa sii wada inuu ku afuufo dadka isticmaala noocooda cusub. Jiir ayaa ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad ugu bilowdo duulimaadka Microsoft Flight. Simulator -ka aad ku dhex baadho cirka ayaa ku siinaya natiijooyinka ugu macquulsan. Waxaad isku dayi kartaa jilitaanka, oo xaqiiqadiisa lagu...
Beeraha Beeraha 14 ayaa ah kan ugu caansan cayaaraha jilitaanka beeraha waxaana bilaash looga heli karaa daaqadaha Windows iyo sidoo kale mobilada. Ciyaarta jilitaanka beeraha, oo aan ku beeri karno beerteenna sida aan rabno, annaga oo adeegsanayna cagafyo ay soo saareen shirkado dhab ah, waxaa loogu talagalay in si fudud loogu ciyaaro...
Hubi inaad si fiican u degto oo aad u degto oo had iyo jeer u timaad garoonka diyaaradaha wakhtigii loogu talagalay. Iyada oo la adeegsanayo Flight Simulator 3D, waxaad fursad u heli kartaa inaad ku duusho daraasiin cabbirro iyo kartiyo kala duwan ah oo aad ka shaqeyso duuliye ahaan shirkadaha ugu waaweyn adduunka. In Flight Simulator...
Euro Truck Simulator 2 Speed ​​Patch waa balastar aad u faaiido badan oo bilaash ah oo loo diyaariyey xallinta arrinta xadka xawaaraha, taas oo laga yaabo inay ugu dhib badan tahay ETS 2 ciyaartoy. Euro Truck Simulator 2, oo ah jilitaanka baabuurta ugu caansan adduunka, ayaa ay qaddarinayaan ciyaartoydu iyagoo uga mahadcelinaya...
Simulator Offroad Bus Mountain, oo ku jira qaybta baabuurta iyo gawaarida ee moobilka guurguura, wuxuu u eg yahay ciyaar jilitaan. Waddooyinka buuraha ee adag ayaa nagu sugaya Simulator Offside Bus Mountain Simulator, oo ay soo saartay NormanD oo loogu deeqay ciyaartooyda madal -guurka lacag laaan. Waqtiyo madadaalo leh ayaa nagu sugaya...
AG Subway Simulator Pro waa ciyaar jilitaan ah oo ay heli karaan ciyaartooyda mobilada lacag laaan Google Play. Soosaarka, oo leh xaglo garaafyo aad u tayo sarreeya, ciyaartoydu waxay la kulmi doonaan jilitaanka tareenka dhulka hoostiisa waxayna isku dayi doonaan inay gaaraan howlaha laga siiyay magaalada. Digniinta iftiimisay, hakadyada...